Cod iyo Muqaal: Gaalkacyo, Soomaaliya: Isbitaalka iyo Xarumaha Caafimaadka MSF ee lacag la'aanta ah - Waa Nolosha Dadweynaha' - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
18.11.2010 | Gobolka Mudug, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Gaalkacyo waxa ay ku taallaa bartamaha Soomaaliya waxaana ay leedahay ‘khad cagaaran’ oo kala qaybiya Koonfurta Gaalkacyo iyo Waqooyiga Gaalkacyo. Labaatan sanadood oo ay rabshado dalka ka socdeen ayaa burburiyey adeegyadii aasaasiga ahaa ee qaranka iyo nidaamkii daryeelka caafimaadka taas oo keentey in ay dadku u nuglaadaan xaalado nafta halis geliya. Carruurta iyo haweenka ayaa ay gaar ahaan dhibaatada ugu weyn soo gaartey iyada oo mid ka mid ah toban iyo labadii haween ahiba ay umul-raacdo iyo iyada oo toddobadii carruur ahiba uu midkood dhinto markuu dhasho.
Gaalkacyo waxa ka jira baahiyo caafimaad oo aan yareyn kuwaas oo ah kuwo aan haysan oo keliya dadka degaanka ee laakiin ay la qabaan kumanaan dad soo barokacayaal ah oo ka soo qaxay rabshadaha Muqdisho oo u jirta Gaalkacyo 750 km si ay u degaan Koonfurta Gaalkacyo. MSF oo keliya ayaa adeegyo daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixiso boqollaal kiilomitir oo ku hareereysan Gaalkacyo. Koox ka kooban 144 shaqaale ah ayaa ka shaqeeya isbitaalka MSF ee Koonfurta Gaalkacyo kuwaas oo adeegyo ballaaran oo kala duwan ku bixiya qaybaheeda bukaan-jiifka iyo bukaan-socodka, adeegyadaas oo ay ka mid yihiin qalliinka dhaawacyada, daryeelka ka horreeya dhalmada iyo kan ka dambeeya dhalmada, adeegyada degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha, daryeelka carruurta, iyo daaweynta qaaxada iyo nafaqo-xumada. Qaar ka mid ah bukaannada ayaa tas-hiilaadkan MSF uga soo safra meelo fog sida Itoobiya, oo 100 km u jirta xuduudda, si ay u soo gaaraan daryeelkan. “Isbitaalka MSF ee Koonfurta Gaalkacyo waxaa uu nolol u yahay dadka halkaan ku dhaqan,” ayaa ay tiri Karin Fischer-Liddle, oo ah Madaxa Hawl-galka MSF ee Soomaaliya.
Waqooyiga Gaalkacyo, ayaa MSF waxa ay ku leedahay xarumo daaweynta qaaxada iyo nafaqeynta ah, oo ay ka mid yihiin xarun bukaan-socodka carruurta ka yar 12 sano jirka. Sanad kasta, MSF waxa ay bixisaa in ka badan 35,000 oo la-talin caafimaad ah.
Tags: Gaalkacyo, Galkacyo